Tag: asọmpi nyocha | Martech Zone
Tag: asọmpi nnyocha
Saturday, March 14, 2015 Fraịde, Machị 13, 2015 Douglas Karr
Rivalfox na-anakọta data site na isi mmalite dị iche iche na ndị asọmpi gị wee mee ka data ahụ dị mfe site na otu ụlọ ọrụ data na-asọmpi. Isi mmalite gụnyere okporo ụzọ, ọchụchọ, weebụsaịtị, akwụkwọ akụkọ, pịa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmadụ na mgbanwe ọrụ. Rivalfox bụ azịza SaaS nke na-etinye ọgụgụ isi na-asọ mpi n'aka gị. Anyị kwenyere na site n'ịmụta n'aka ndị asọmpi gị, ị nwere ike ito eto ngwa ngwa, zere mmejọ ma nweta uru. Na Rivalfox, ụlọ ọrụ nha niile nwere ike
BuzzSumo: Nnyocha ọdịnaya dị elu site na Isiokwu, Ngalaba, ma ọ bụ Onye chepụtara
BuzzSumo bụ igwe nyocha nke na - enyere ndị ahịa aka inyocha isiokwu, infographics, ozi ndị ọbịa, inye ego, ajụjụ ọnụ na vidiyo maka ọdịnaya kacha emetụta, ndị asọmpi na ndị na - eme ihe ike. Ewezuga nzacha site na ụdị ọdịnaya, BuzzSumo nwere ụfọdụ nhọrọ nhọrọ ọchụchọ dị oke mkpa: Ewezuga okwu: mobile -apple ma ọ bụ mobile -nokia.com Chọọ ọtụtụ okwu: ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ekwentị ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ama ma ọ bụ ama ma ọ bụ iphone Chọta nkebi ahịrịokwu: "ahịa azụmaahịa" ma ọ bụ "ahịa ahịa" Chọọ site na URL ma ọ bụ na ngalaba: martech.zone Search